အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ လာတဲ့ သတင်းတွေ အပေါ် ဖြေရှင်း လာတဲ့ မင်းသမီး လမင်းကဗျာ (ရုပ်သံ) – Let Pan Daily
အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ လာတဲ့ သတင်းတွေ အပေါ် ဖြေရှင်း လာတဲ့ မင်းသမီး လမင်းကဗျာ (ရုပ်သံ)
Let Pan | August 7, 2020 | Celebrity | No Comments
ဟန်ငြိမ်းဦး ဟာအနုပညာရှင်တစ်ချို့နဲ့ တယ်လီတစ်ချို့ရဲ့ လျှို့ဝှပ်ချက်တွေ ကို အမြဲထုတ် ဖော်ရင်း ဖော်ကောင်အဖြစ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ နေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ငြိမ်းဦး ဟာ မင်းသမီး လမင်းကဗျာ ရဲ့ အကြောင်းတွေ ဖွင့်ထုတ်ထားတာကိုတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်မှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လမင်းဟာ အခုလို ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။
လမင်းကဗျာအကြောင်းကိုတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သက်သေ သာဓကနဲ့ တိတိကျကျတင်ပေးပါ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ပြီးထွက်ပြေးတာလည်းတင်ပေးပါ။ HD ရှိရင်လည်းတင်ပေးဖို့ ဟန်ငြိန်းဦးကိုဒဲ့ပြောလာပါတယ်။ စုံတွဲပုံတွေရိုက်တိုင်းသာ ယောက်ျားရကြေးဆို လမင်းကဗျာမှာ ယောက်ျားတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ လို့ လည်းဒဲ့ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်
အခုလိုအဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….
အှနျလိုငျးမှာ ပြံ့နှံ့ လာတဲ့ သတငျးတှေ အပျေါ ဖွရှေငျး လာတဲ့ မငျးသမီး လမငျးကဗြာ (ရုပျသံ)
ဟနျငွိမျးဦး ဟာအနုပညာရှငျတဈခြို့နဲ့ တယျလီတဈခြို့ရဲ့ လြှို့ဝှပျခကျြတှေ ကို အမွဲထုတျ ဖျောရငျး ဖျောကောငျအဖွဈ နာမညျကွီးနတေဲ့ နသေူဖွဈပါတယျ။ ဟနျငွိမျးဦး ဟာ မငျးသမီး လမငျးကဗြာ ရဲ့ အကွောငျးတှေ ဖှငျ့ထုတျထားတာကိုတော့ အားလုံးသိပွီးဖွဈမှာပါ။ ဒီသတငျးတှထှေကျပျေါမှုနဲ့ ပတျသတျပွီး လမငျးဟာ အခုလို ဖွရှေငျးလာခဲ့ပါတယျ။
လမငျးကဗြာအကွောငျးကိုတငျမယျဆိုလို့ရှိရငျ သကျသေ သာဓကနဲ့ တိတိကကြတြငျပေးပါ။ အိမျထောငျရေးဖောကျပွနျပွီးထှကျပွေးတာလညျးတငျပေးပါ။ HD ရှိရငျလညျးတငျပေးဖို့ ဟနျငွိနျးဦးကိုဒဲ့ပွောလာပါတယျ။ စုံတှဲပုံတှရေိုကျတိုငျးသာ ယောကျြားရကွေးဆို လမငျးကဗြာမှာ ယောကျြားတှအေမြားကွီးဖွဈနမှောပေါ့ လို့ လညျးဒဲ့ဖွရှေငျးလာခဲ့ပါတယျ
အခုလိုအဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page မှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…နောကျမြားမှာလညျး အခုလိုဆယျလီတို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီတငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေးသှားကွပါအုံးနျော….
နာမညျကွီး လူကွိုကျမြားနတေဲ့ ဝကွေီး ရဲ့ သီခငျြးအသဈ ဖွဈတဲ့ “ငိုးမ ကိုဗဈကွီး” သီခငျြး video
အိမျမှာနရေငျး ပုံစံလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမူ ရှိလှနျးနတေဲ့ မိုးပှငျဖွူ
မိမိုကျလှနျး တဲ့ ဖကျရှငျ နဲ့ ဆကျဆီ ကလြှနျးနတေဲ့ ဆှဇေငျထကျ” ရဲ့ ပုံရိပျမြား